QEYLO-DHAAN: Qiso laga naxo iyo farriin..!!
Soomaalidu waa dad xirxiran oo dhowrsan, waana dad isla weyn oo qabkoodu sareeyo waxay ahaan jirtay sifo dadkeena ay laheeyeen taariikhiyan, laakiin isbedelka dhacay ee qaranjabka ugu weyn yahay wuxuu na dhaxalsiiyay inaanu weyno wax waliba oo qiime lahaa Diin ahaan, dhaqan ahaan iyo dad ahaanba.
Dhaqanka lumaya ee haweenkeena wuxuu ka mid yahay dhibatooyinka waaweyn ee hore u bilownaa balse xaaladda la galay ay uga sii dartay, duruufta jirtana ay sii quudisay ilaa heer gebi ahaan laga tegayo dhaqankii suubaa iyo diintiiba.
Ciidamadii shisheeye ee dalka yimid sanadkii 1992-kii ilaa 1995-kii waxay ku kaceen falal aan yareyn oo lagu waxyeeleeyay Soomaalida ku dhaqan degaanadii ay ka howl galeen, sidaasoo ay tahayna inta la ogyahay ee la shaaciyay aad ayay u yar yihiin, taasoo la wada fahmi karo sababta ugu wacan.
Nino Omar Ibrahim iyo canugeeda, Eeg The New Vison
Jaridadda The New Vison waxay sheegtay in markii askarta Uganda u dhoofayeen Soomaaliya in madaxweynaha dalkaasi, Museveni, uu askarta ku yiri "Waxad baxeysaan idinkoo caafimaad qaba. Ha bilaabina dabeecad masuuliyad darro ah oo idinku sababeysa in aad qaadaan cudurka HIV/AIDS." CAJIIB
Dhacdo kale oo aan goobjoog u ahaa waxay ahayd saddex gabdhood oo Soomaali ah da’dooduna u dhaxeyso 16 - 18 sano ayaa lacag 300 Birta Itoobiya ah loo sarifay, goobtii sarifka oo aanu si kama’ ah ugu kullanay ayay dadkii meesha joogay isu sheegayaan inay yihiin gabdho ay qabaan askar Itoobiyaan ah oomarkaasi deganaa dhisme Dugsi sare oo Muqdisho ku yaala, waxaana hadaladii laga sheegayay ka mid ahaa in hal qol lagu wada qabo, diinta lagu qabose ma garan.!!!!.
SAXAAFADDA SOOMAALIDA siiba tan gudaha waa inay arintan tooshka saarto baaritaanno badanna sameyso si ay shacabka wax u ogaadaan, kiisaska kale ee jirana la soo shaac bixiyo.
INTA WAXGARADKA AH Waa inay isu xil saaraan daba qabashada dadka, dhinacyada arrintan ku lugta lehna ay kala xiriiraan, waxna ka weydiiyaan ugu yaraan sida ay wax u wadaan, Tusaale ahaan ciidamada Uganda waa loo dacwoon karaa welibana wax weyn ayaa laga qaban karaa arrintooda.
BULSHADA INTEEDA KALE: Waxaa la gudboon inaysan qarin falalka iyo kiisaska noocaasi ah ee ay gaarsiiyaan cid kasta oo ay is leeyihiin wax bay ka qaban kartaa ama ugu yaraan ay la haldaan saxaafadda gudaha si ay dibadda ugu soo baxaan tacadiyadan oo ah dagaal lagu hayo bulshadeena dhinacii u fiyoobaa.
Walaalayaal dagaalku nagu socdaa waa wejiyo badan yahay, midkanse waxba ma reebayo waa dagaal mujtamac ahaan nagu wajahan oo haweenkeena dhalan rogayo, sidaasi darteed waa inaynu u wada istaagnaa sidii looga hortegi lahaa, waa sax Soomaalidu ma jecla in arrimahan la faaqido laakiin suuragal maaha in xasuuqa qarsoon ee ku socda haweenkeena laga aamuso.